#Xubno ka tirsanaa Ergadii soo dooratay Xildhibaanada Baarlamaanka oo la dilay - Get Latest News From Horn of Africa
#Xubno ka tirsanaa Ergadii soo dooratay Xildhibaanada Baarlamaanka oo la dilay
Laba ka mid ah Ergadii xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya soo xushay oo midi ay haweeney tahay ayaa lagu dilay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, sida ay inoo sheegeen dadka deegaanka.
Rag hubeysan oo watay mootada loo yaqaano VIKON ayaa marka hore xaafada Ceel Qode waxa ay ku dileen Xasan Caalin, kadibna waxay u soo talaabeen xaafada Daahisooy, halkaasi oo ay ku dileen Aamino Mayow, labadan ruux waxaa si gaar ah loogu dilay meel aan ka fogeyn guryahooda.
Dilalka loo geystay labadan qof oo xildhibaanada ku soo doortay degaanada Koonfur Galbeed ayaa waxaa ka dambeeyay rag bastoolado ku hubeysnaa, kuwaasi oo qeybta sare ee jirka ka toogtay, kadibna goobta ka baxsaday, sida ay ku warameen goobjoogayaal.
Wariye ku sugan Afgooye ayaa soo sheegaya in ciidamada booliska ay waqti dambe gaareen halkaasi, waxayna qaadeen meydadka labada ruux, iyaga oo intaasi kadib sameeyay baaritaano aan cidna lagu soo qaban.
Ururka Al Shabaab ayaa waxaa la xusuustaa in ay dil ugu hanjabeen cid kasta oo ka qayb qaadata soo xulista xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya.
Tan iyo markii la doortay Madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa waxaa caasimadda Muqdisho iyo degaanada ku dhaw ku soo badanayay dilalka ka dhanka ah Ergada, illaa iyo hadana ma jirto cid la sheegay in loo soo qabtay beegsiga Ergada.